Isitolo esidayisa yonke impahla ngokwezifiso Heavy Duty Retractable Dog Leash ifektri kanye nabaphakeli | UKudi
Intambo yokudonsa ebuyisekayo iyintambo ebanzi eyisicaba. Lo mklamo ukuvumela ukuthi ugoqele intambo emuva ngokushelela, okungavimbela ngempumelelo ukuthi leash yenja ingashayeki futhi ifinywe. Futhi, lo mklamo ungakhuphula indawo ephethe amandla entambo, wenze intambo yokudonsa ithembeke ngokwengeziwe, futhi imelane namandla amakhulu okudonsa, okwenza ukusebenza kwakho kube lula futhi ikwenze ube nenduduzo ethuthukisiwe.
I-2.360 ° i-tash-free custom e-retractable inja leash engenakusihlwa ingaqinisekisa inja ukuthi igijime ngokukhululeka ngenkathi igwema inkathazo ebangelwe ukubanjwa yizintambo. I-ergonomic grip kanye ne-anti-slip isibambo sinikeza umuzwa wokubamba onethezekile.
3.Nayi isikhwama semfucumfucu ephathekayo emise okulula futhi umqulu owodwa wezikhwama zepulasitiki zemfucuza esibambo. Kuyinto hands-free futhi elula. Ikuvumela ukuthi ujabulele ngempela injabulo yokuhamba.
Thumela Uphenyo Xoxa Manje
Okumnyama nokumhlophe noma okwenziwe ngokwezifiso
I-ABS + TPR + SS + Inayiloni
Iphakheji / Ilogo:
L / C, T / T, i-Paypal
Inzuzo ngokwezifiso Heavy Duty Retractable Inja Leash
Indlela yokukhiya enokwethenjelwa iqinisekisa ukuthi iribhoni linganweba futhi lihlehle kahle. Cindezela inkinobho yamabhuleki ukuyiphula, bese uslayida inkinobho yokukhiya phambili ukuze ukhiye leash. Uma ufuna ukubuyisela isimo samahhala, mane ulayishe inkinobho emuva. Kuphela ukuzikhiphela nokukhishwa ngesithupha sakho kuphela, kulula futhi kuphephile.
Isithombe se-Custom Leavy Duty Retractable Dog Leash
1.Are wena ifektri noma ukuhweba inkampani?
Siyimboni ekhethekile ekukhiqizeni imikhiqizo yezilwane iminyaka engama-20.
2.Ukwenza kanjani ukuthunyelwa?
RE: Ngolwandle noma ngendiza ngama-oda amaningi, ukulethwa okucacile njenge-DHL, UPS, FEDEX, EMS, TNT yama-oda amancane.
Uma une-ejenti lokuthumela e-China, singathumela umkhiqizo ku-China Agent wakho.
3.What isikhathi sakho phambili?
RE: Cishe izinsuku ezingama-40 ngokujwayelekile.uma sinemikhiqizo esitokisini, kuzoba cishe izinsuku eziyi-10.
4. Ngingathola isampula yamahhala yemikhiqizo yakho?
RE: yebo, kulungile ukuthola isampula yamahhala futhi sicela ukhokhele izindleko zokuthumela.
5: Iyini indlela yakho yokukhokha?
RE: T / T, L / C, i-Paypal, ikhadi lesikweletu njalonjalo.
6. Hlobo luni lwephakethe lemikhiqizo yakho?
RE: Kulungile ukwenza ngokwezifiso iphakethe.
7.Can ngivakashele imboni yakho ngaphambi kwe-oda?
RE: Impela, wamukelekile ukuvakashela imboni yethu.Sicela uhlele i-aphoyintimenti nathi ngaphambili.
Ufuna uphenyo lwakho lwale njini ye-Stainless Steel Dog
Langaphambilini I-Extension Bungee Retractable Dog Leash
Ileash Ebuyisekayo Yezinja Ezincane
Isitolo esidayisa yonke impahla Retractable Dog Leash
Indwangu Ekhanyayo Yenja Yezinja
I-Extension Bungee Retractable Dog Leash